साझापोष्ट संवाददाता /काठमाडौं, २१ चैत । असगर अलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार हुन् । काठमाडौं प्रेसको समाचार पोर्टल अली आवद्ध कम्पनीले डेभलप गरेको हो । काठमाडौं प्रेस अनलाइनले प्रकाशित गरेको एक समाचार सामग्री एकाएक गायब भएपछि वेबसाईट डेभलप गर्ने कम्पनीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी सल्लाहकार अली संचालक रहेको एफवान सफ्टकै भगिनी कम्पनी सिरान टेक्लोजिजले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकारी सकेको छ ।
वेबसाईट डेभलप गर्ने कम्पनीले नै आफ्नो गल्ती भएको आधिकारीक रुपमै स्वीकार गरिसक्दा पनि सरकारले कम्पनीका संचालक असगर अली लगायतलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । यो घटनाले प्रेस जगतमा मात्रै नभई सिंगो डिजिटल कारोबारमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
साईबर क्राईम लगाउनुपर्छः राम कार्की
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरु नै यो घटनाको भर्त्सनामा उत्रिएका छन् । नेता राम कार्की यसमा वेबसाईट कम्पनीको गल्ती देख्छन् । कोही कसैको दबाब र निर्देशनमा अनलाईनमा प्रकाशित सामग्री हटाउनु भनेको साईबर अपराध भएको उनको ठम्याई छ ।
उनले साझापोस्टसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो घटना निक्कै निन्दनीय छ, तत्काल कम्पनीका संचालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ, हैन चुनौती झन थपिन सक्छ ।’ पूर्वसञ्चार मन्त्री समेत रहेका उनले जहाँको पहुँचको मान्छे भएको भएपनि साईबर अपराध अन्तर्गतको कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्रीले असगरलाई आइटी विज्ञबाट तुरुन्त हटाउनुपर्छ –शेखर कोइराला
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीले असगर अलीलाई पदबाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले एक विज्ञप्ति निकालेर काठमाडौं प्रेसको समाचार साईटबाट हटाईएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसारमै नहुने यस्तो घटना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले असगरलाई तत्काल आईटी विज्ञ पदबाट बर्खास्त गरी घटनामा संलग्नलाई साईबर क्राईम अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सिरान टेक्नोलोजीले पनि घटनाप्रति माफी मागिसकेकोले सरकारले अब कानुनी कारबाही अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । अली संलग्न रहेको कम्पनीले देशका धेरै निजी कम्पनीको एप्लिकेशन बनाएको सार्वजनिक भएको भन्दै उनले भोली यसरी नै सिरान टोक्नोलोजिजले अरु कम्पनीको वेबसाईट र एप्लिकेशन र बैंकमा रहेका अरबौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्नसक्ने बताए ।
समाचार साईट ह्याक गर्नेको हातमा २२ वटा बाणिज्य बैंक र २६ वटा वित्तिय संस्थाको गेटवे हुनुले लाखौँ नेपालीको अरबौं रुपैयाँ असुरक्षित रहेको उनको तर्क छ ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकारले तुरुन्त जोखिम व्यवस्थापन गरी कुनैपनि बैंकमा रहेका नेपाली नागरिकको एक रुपैयाँ पनि जोखिममा नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
कम्पनी सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छः दिपशिखा
रामप्रसाद सापकोटा (दिपशिखा) सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सम्वद्ध युवा संघका अध्यक्ष हुन् । उनी यो घटनामा तत्काल वेबसाईट डेभलप गर्ने कम्पनीका संचालकलार्ई पक्राउ गर्नुपर्ने बताउँछन् । कसको निर्देशनमा भन्नुभन्दा पनि कम्पनीले यस्तो काम गर्न हुने की नहुने भन्ने कुरा मुख्य कुरा भएको उनले बताए ।
शासकले आफ्नो विवेक र होस गुमाउँदा अरु मानिसहरुको स्वतन्त्रताको ख्याल नगर्ने भन्दै उनले कसैले आदेश वा निर्देशन दिँदैमा कम्पनीले पनि यस्तो गम्भीर गल्ती गर्न नहुने बताए । उनले चित्त नबुझ्दैमा कसैले प्रेसमाथि ठाडो निर्देशन दिन नमिल्ने र यो घटना निन्दनीय भएको बताए ।
साझापोष्टसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कम्पनीलाई यत्तिकै उम्कन दिनुहुँदैन, तुरुन्त कम्पनी संचालकलाई पक्राउ गरी कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । यो कुनै एउटा वेबसाईटको सवाल भन्दापनि आम पक्षको सबालको पक्ष हो ।’ डेभलपर्सलाई सिष्टमभित्र छिरेर डाटा नै उडाउने छुट नभएको भन्दै उनले यस्तै हो भने हरेक संस्था, कम्पनी, बैंक लगायतका वेवसाईट र अरु सिष्टममा पनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताए ।
प्रतिकारमा उत्रने बेला आएको छः सम्पादक- सुवास घिमिरे (रिपब्लिका दैनिक)
सिरान टेक्नोलोजिजले संसारमै अहिलेसम्म नभएको गल्ती गरेको रिपब्लिका दैनिकका सम्पादक सुवास घिमिरेले बताएका छन् । भोलिका दिनमा जसले एक्सक्लुसिभ खबरहरु ब्रेक गरेपनि डेभलपर्स कम्पनीले उडाईदिने खतरा बढेकोले त्यतिकै छाड्न मिल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
नेपाली प्रेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट आक्रमण भैरहेको स्मरण गर्दै उनले साझापोष्टसँग कुरा गर्दै भने, ‘कसैलाई प्रकाशित सामग्रीप्रति चित्त बुझेन भने सिधै आक्रमण गर्ने चुनौती बढेकोले कम्पनी सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।’
उनले अहिले यसको प्रतिकारमा उत्रिएन भने पछिको परिणाम झन भयावह हुनेतर्फ संकेत गरे । प्रतिवाद अरु तवरबाट गर्न सकिने भएपनि यसरी आक्रमण गर्नु र कम्पनीले गल्ती स्वीकारीसक्दा पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा असगर अलिको कम्पनीलाई छुटकार दिने वहाना हुन सक्ने उनले बताए ।
यो आपराधिक क्रियाकलाप होः सम्पादक- कसमस विश्वकर्मा (काठमाडौं प्रेस)
कशमश विश्वकर्मा सम्पादक रहेको काठमाडौं प्रेस डटकमबाट समाचार सामग्री एकाएक गायब भएपछि नै यो बहस सतहमा आएको हो । काठमाडौं प्रेसले त्यससम्बन्धि सामग्री फेरी प्रकाशित गरेको छ । दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने सम्पादक विश्वकर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’
कम्पनीको तर्फबाट माफी माग्ने काम भएको भएपनि यो अपराधिक क्रियाकलाप भएकोले कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले समाचार साईटको मात्रै नभई सबै डिजिटल प्रणालीमाथिको सुरक्षा चुनौती नै थपिएकोले त्यतिकै छाड्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । यो कम्पनी मातहतमा धेरै बैंक र कम्पनीका सफ्टवेर र अनलाईन पेमेन्टहरु पनि रहेकाले अब आफूहरु कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा जाने उनले प्रतिक्रिया दिए ।
सूर्य थापाको कड्के जवाफ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने साझापोष्टलाई कड्के जवाफ दिएका छन् । उनले आफ्ना भनाईहरु फेसबुकमार्फत नै सार्वजनिक भैसकेको भन्दै साझापोष्टसँग अरु कुरा बोल्न नै चाहेनन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले कपोलकल्पित र मनोगणन्ते कुरा लेखेर विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं प्रेसले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारले दबाब दिएको कुरा कत्तै पनि उल्लेख नगर्दापनि महासचिव विष्टले महासंघको लेडरप्याड दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यद्यपि, नेपाल पत्रकार महासंघको विज्ञप्तिमा काठमाडौं प्रेसले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीका ‘राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारका अनुसार’ उल्लेख गरिएको छ ।
हथौडालाई भन्दा हथौडा चलाउने हातलाई खोज्नुपर्छः डा. कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार तथा प्राध्यापक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याललाई हटाएर उनको ठाउँमा सूर्य थापालाई ल्याएका हुन् । यो घटनाबारे प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि मुख खोलेका छन् ।
उनले सत्ता सञचालन गर्नेतर्फ संकेत गर्दै कम्पनीको एकल आँटले मात्रै यस्तो गल्ती गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फट ट्वीट गर्दै असगर र विकास प्राविधिक मात्रै भएकाले उनीहरुलाई चलाउने हातहरुको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अस्गर जी र विकास जी प्राविधिक मात्रै हुन्, म हथौडालाई भन्दा हथौडा चलाउने हातलाई खोज्न भन्छु । यो प्रकरणको कारक राजनीतिक तहकै हुनुपर्छ । सिरानटेकलाई कसले त्यसो गर्न लगायो, त्यो खोजौँ । उनीहरुको आँटले मात्रै त्यति ठूलो गल्ती गर्ने काम भएको छैन । ’
काठमाडौं प्रेस डटकममा छापिएको ‘महंगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शीर्षकको सामग्री एकाएक गायब गरिएपछि यो बहस सतहमा आएको हो । यस कदमले स्वतन्त्र पत्राकारितामाथिको हस्तक्षेप त छँदै छ, अरु डिजिटल प्रणालीमाथिको सुरक्षाको चुनौती पनि थपिएको छ ।
यद्यपि डा. अर्यालले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका मानिसहरुको दबावमा अलिले समाचार हटाउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
झन प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा रहेका मानिसहरुको संलग्नता रहेको अवस्थामा प्रम ओलीले घटनामाथि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् ? यसको जवाफका लागि भने केही समय कुर्नुपर्छ ।